HomeAfrica100% Anagaa Lahayn Masuuliyada Guuldarada – Klopp
Tabobaraha Liverpool Jurgen Klopp Oo Dusha Saartay Masuuliyadda Guuldaradii 4-1 ka Ahayd ee Tottenham.
Ceebta difaac la’aaneed ee haysata kooxda Liverpool ayaa waxaa ku dhex fashilay garoonka Wembley naadiga Tottanham iyadoo uu Harry Kane duufaantii goolasha ahayd kulahaa laba kamid ah.
Dele Alli iyo Son Heung-min ayaa sidoo kale ahaa dhaliyeyaasha goolasha kale ee Tottenham, waxaanu ahaa Maxamed Saalax, ciyaaryahanka goolka madiga ah u saxeexay Liverpool.
Tirada goolasha laga dhaliyey Liverpool ayaa cirkaa isku sii shareeraya, iyadoo ay hadda marayaan 16 gool in laga xareeyey xili ciyaareekdan, ciyaarta kadib ayaanu Klopp daboolka kaga qaaday in kooxdiisa dhibaatada ugu culusi ka haysato dhinaca dambe ee difaaca.
Klopp wuxuu u sheegay warfidiyaha BBC Sport: ”Waxaanu dareemaynay inaanu gacanta ku hayno ciyaarta maamulkeeda 60, 70% , laakiin wixii ka dambeeyey 2-0 marki ay ciyaartu maraysay, waxaa la arki karayay , wixii aanu ka samaynaynay goolka hareerihiisa, jilicsanaanta difaacayaga, waxaa na haysatay mashaqo difaac xumo xili ciyaareedkan oo dhan.
Maradona Oo Garoonka Ka Daawanayay Ciyaarta
“Fursadahayagii waanu helnay, mid qudha ayaanu ku dhalinay, ciyaartiina wey sii socotay.
“inaad hal gool ka dambeyso Tottenham, waad xalin kartaa.
“Goolka saddexaad guud ahaanba ma ahayn mid naga dhalan karayay haddii aanu shaqo fiican qabanayno.
“Afar khalad oo aanu samaynay, kadib Dele Ayaan xataa kubadda u laagin ama cagtiisu ugu dhicin si 100% ah.”
Maradona Oo La Gudoonsiiyey Funaanada Lumber 10 ee Tottenham
Klopp wuxuu intaas ku daray: “10 daqiiqo kadib markii qaybta labaad bilaabatay, gool kale ayaanu anagu u suurto galinay inay naga dhaliyaan. Kaas ayaana muujiyey mashaqada ciyaarta – Waxay ahaayeen kuwo dhamaantood ku xoonsan xagayaga, taasina 100 % anaga ayaa masuuliyadeeda leh.
Numancia vs Real Madrid 0-3 – All Goals & Extended Highlights
Benítez Oo Berri U Duulaya Madrid Iyo M/Weyne Xigeenka Oo Qiray Heshiis Dhacay
31/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Chelsea vs Norwich City 0-0 All Goals & Highlights